Fursadaha Kale ee Iskaa Wax U Qabso ah
In kasta oo cunno la keenayo ay tahay baahideena ugu weyn ee iskaa wax u qabso ah, haddana weli waxaa jira dhowr siyaabood oo qoyskaagu u taageeri karo Cunnooyinka Gawaarida haddii bixinta ay u shaqeyn weydo qoyskaaga hadda. Fursadahaan iskaa wax u qabso ee saaxiibtinimada leh ee qoysaska sidoo kale waa habab aad u wanaagsan oo lagu caawiyo waayeelka iyo shakhsiyaadka naafada ah ee bulshadaada.
Metro Meals on Wheels waxay ku faraxsan tahay inay ka jawaabto wixii su'aalo ah ee aad ka qabto oo ku saabsan fursadaha iskaa wax u qabso ee saaxiibtinimo qoys. Nagala soo xiriir [email protected] ama wac (612) 623-3363 wixii su'aalo ah ama si aad u ogaato halka aad geynayso mashaariicdaada dhammaystiran ama tabarucaadkaaga. Waxaan sidoo kale jecel nahay inaan maqalno sheekooyinka ku saabsan khibradahaaga iskaa wax u qabso! Sawirro ama sheekooyin ku saabsan howlahaaga ayaa loo diri karaa [email protected] ama halkan la wadaago.
Soo iibso oo qurxin duubabka foornada darawallada gudbinta
Bixinta duubista foornada darawaladayada tabarucayaasha u keenaya waxay ka caawisaa iyaga inay u soo gudbiyaan qaab isla markaana ka ilaaliyaan gacmahooda cuntada kulul, dhammaantood iyagoo dhoola cadeynaya wejiyada dadka qaata. Ama iibso furka (furka midabkeedu yahay midab khafiif ah oo aan si fiican u shaqeyneyn), ha lagu deeqo, ama weydii qoysaska inay qaar ka mid ah keenaan munaasabad adeeg ah oo ka socota kaniisadaada ama iskuulkaaga. Waa kuwan qaar qurxinta fikradaha si aad u bilowdo.
Samee kaararka salaanta ama dhalashada
Ma jiraan wax dhalaalaya maalmaha kuwa cuntada qaata sida kaararka salaanta ee gacanta lagu sameeyo. Kaararka waxaa si gaar ah looga helaa ciidaha, maalmaha dhalashada iyo waqtiyada jirada. Cunnooyinka Wheels waxay hubiyaan in loo geeyo dadka waawayn oo ay weheliyaan cuntadooda maalinlaha ah ee ku habboon fasaxa ama dhalashada. Isticmaal hal-abuurkaaga, warqad yar, iyo wixii kale ee farshaxan ah ee aad haysato oo xusuusnow inaad kaararkaaga guud ka dhigto mid guud si ay ugu habboonaan doonaan qof kasta oo qaata.
Meelaha sida wanaagsan loo qurxiyay ayaa ah wax lagu farxo oo loo keeno dadka cuntada qaata, sidoo kale kuwa qorraxda qabta ama hadiyado kale oo yaryar. Haddii aad awood u leedahay inaad nuujiso borotikaga, wax walboo hagaagsan!
Qurxinta bacaha qadada
Marka lagu daro helitaanka qaybta kulul ee cuntada ee saxaarad, dadka qaata Cunnooyinka Gawaarida waxay ku helaan qaybta qabow boorsada qadada. Nolol ku dar cuntadooda adoo qurxinaya bacaha qadada! Si fudud u soo iibso bacaha qadada warqadda ah oo aad u isticmaasho hal-abuurkaaga, qalabkaaga wax lagu sawiro, calaamadaha, istiikarka, ama wixii farshaxan ah ee aad gacanta ku hayso
Abuur bustayaal dhogor-dhogor ah
Bustooyin-dhogor-dhogor ah oo aan-tol lahayn ah ayaa sameeya mashruuc fudud oo xiiso leh kaas oo ku siin kara diirimaad iyo raaxo leh qofka qaata Cuntada Gawaarida. Waxaad u baahan doontaa inaad soo iibsato dharka dhogorta, laakiin ka dhigaya mid deg deg ah oo fudud. Halkan waxaad ka heli kartaa mid fudud tilmaamaha bustaha dhogorta aan la tolo.
Samee baakado daryeel
Inta lagu jiro fasaxyada iyo maalmaha dhalashada, dadka cuntada qaata waxaa la siiyaa boorso khaas ah oo ay ku dhahaan, "Waan danaynaynaa." Kani waa mashruuc weyn oo loogu talagalay qoysaska, Gabdhaha Scouts, kooxaha adeegga, kooxaha iskuulka ama barnaamijyada iskaa wax u qabso ee goobta shaqada. Si loo fududeeyo sida ugu macquulsan ee shaqsiyaadka iyo kooxaha wax ku biirin kara barnaamijka, waanu aasaasnay tilmaamaha iyo tilmaamaha si fudud loo-raaco taas waa la daabici karaa oo lala wadaagi karaa kooxdaada.
Marti galiso dhaqaale uruurin
Isbeddel ku samee adoo martigelinaya lacag ururin qoys, iyadoo dakhliga soo gala lagu quudinayo waayeelka iyo kuwa naafada ah ee bulshadaada. Waa kuwan fikrado xiiso leh:
Ururi dinaar si aad ugu deeqdo Cunnooyinka Lugaha. Booqasho www.pennies.org oo guji "Penny & Charity."
Tuur xaflad Soo qaado koox mutadawiciin ah oo qof ha kuugu deeqo cunto iyo cabitaano. Lacag yar ka qaado si loogu ogolaado iyo / ama weydii martidaada tabarucaada Cuntada Lugaha.
Kireyso qoyskaaga shaqooyinka guriga. U soo bandhig howlahaaga sida majarafaynta barafka, caleemaha raqda, xaaqista, nadiifinta, ranjiyeynta ama shaqooyinka kale ee aan caadiga ahayn. Ogeysii kuwa helaya inay ka faa'iideysan doonaan Cuntooyinka Lugaha Lugta.
Barnaamijyada Cunnada ee Wheels waxay kuxirantahay tabarucaadka shaqsiyeed. Ku darsiga $30 ayaa quudin doona cunno qaataha muddo toddobaad ah.
Ku tuur xafladda dhalashada si aad uga faa'iideysato Cunnada Wheels
Maalmaha dhalashada-wanaagsan waa habka ugu wanaagsan ee carruurta loogu dhiirrigeliyo inay ka fekeraan dadka kale inta qarax ka dhacayo maalintiisa weyn. Waa kuwan fikradaha qaarkood ee loogu talagalay mashaariicda xisbiga ee ka faa'iideysanaya Cunnada Lugaha.
Dooro mid ka mid ah mashaariicdeena qoys-saaxiibtinimo, sida sameynta booska, boorsooyinka qadada, kaararka, bustayaasha ama xirmooyinka We Care ee ah howlaha koowaad ee xisbiga. Ama samee dhowr ka mid ah mashaariicdan!
Haddii aad go'aansato xaflad no-hadiyad ah, tixgeli inaad ka codsato martida inay ku deeqaan metro metals on wheels bedelkii hadiyad.
U kaxee ilmahaaga si aad u gayso alaabada ay martidu abuureen iyo wixii deeqo lacageed ah ee aad soo ururisay.
Baahida ugu weyn ee aan qabno waa gaarsiinta cunnada, waana fursad qoys u saaxiib ah. Isku qor si aad u gaarsiiso qoys ahaan ama wax dheeri ah baro.